Ngaba unokwenza ingxelo ebhaliweyo? Landela le ndlela | Uncwadi lwangoku
El Amagqabantshintshi ngetekisi lolunye lolona vavanyo luqhelekileyo kumxholo we Ulwimi noncwadi Ngexesha lesigaba seBaccalaureate. Kodwa yintoni kanye kanye usetyenziso lokwenza ingxelo ebhaliweyo? Kule nqaku siphendula lo mbuzo, uninzi lwabanye kwaye sikuxelela indlela yokwenza uluvo olufanelekileyo ngesicatshulwa ngokulandela amanyathelo ambalwa alula.
Awuyi kuchasa nasiphi na isicatshulwa soncwadi ukuba ulandela ezi ngcebiso zilula.
Amagqabantshintshi okubhaliweyo: Yintoni, iinjongo kunye nendlela yokwenza
Amagqabantshintshi okubhaliweyo ngumsebenzi onokusetyenziselwa ungene kwimisebenzi yoncwadi ukufumana umkhwa wokuqonda intsingiselo epheleleyo. Iinjongo zayo eziphambili kukuchaza umyalezo ngokucacileyo nangokuchanekileyo, kunye nokuhlalutya indlela okanye ngoluphi ulwimi iilwimi ezakhiwe ngayo.
Indlela yokwenza ingxelo elungileyo yesicatshulwa
Ukuba ufuna ukuba isicatshulwa sakho silunge kwaye ufumane ibakala elihle kakhulu kuvavanyo lokukhetha olulandelayo, kuya kufuneka ulandele le ndlela.
Isinyathelo se1: Yenza a Ukufunda ngononophelo kwisicatshulwa soncwadi esinayo phambi kwethu. Oku kufundwa sisigaba ngaphambi kwengcaciso, oko kukuthi, ngaphambi kokuqala umthambo kuyafuneka ukuba ufunde isicatshulwa ngononophelo kwaye ukuqonde ngokucacileyo oko kuthethwayo kuwo kunye nentsingiselo yawo onke amagama kunye neenkcazo zawo (sicebisa ukuba nesichazi-magama kufutshane apho kunokwenzeka khona ukukhangela amagama angaziwayo).
Inyathelo 2: Khangela isiqwenga okanye umsebenziOko kukuthi, ukuyibeka kwimeko kunye nexesha, ukwazi ukuba ngubani umbhali oyibhalileyo (eya kuthi isinike umkhombandlela ocacileyo weempawu zayo) kwaye ekugqibeleni, ukuba sisiqwenga esifutshane, ukwazi ukuba ngowuphi umsebenzi bobabo.
Isinyathelo se3: Kuya kufuneka sichaze uhlobo lwesicatshulwa soncwadi Kunye ne uhlobo lwentetho ebhaliweyo. Oko kukuthi, ukuba isicatshulwa sesomculo, kwindawo yemidlalo yeqonga, kwingxelo, njl. Umzekelo, ukuba isicatshulwa sibhaliwe kwivesi, iya kuba lixesha lokwenza inkcazo yemetric ngayo, ngomlinganiso weevesi, isingqisho, izitanza, igama lombongo, njl. Ukuba, ngokuchaseneyo, isicatshulwa siyabalisa, kufuneka senze uhlalutyo lwezinto ezahlukeneyo, ezinje ngomlinganiswa wombalisi, isenzo esenziweyo, abalinganiswa ababonakalayo, isikhokelo esibalisayo, njl.
Isinyathelo se4: Siza kuhlalutya umxholo. Kwesi sigaba siza kuhlalutya umxholo ngokunzulu kangangoko kunokwenzeka. Ngenxa yoku, kufuneka sinike ingqalelo kwaye sihlalutye ngononophelo imiba enje ngobume bomxholo, umxholo, iingcinga eziphambili zombhalo, izimvo zesekondari, njl.
Isinyathelo se5: Siza kuhlalutya le fomu. Kweli nqanaba, siza kuchaza ukuba umxholo ubonakaliswa njani kwifom. Umzekelo: ukuba umbhali ebefuna ukuveza okanye ukudlulisa ukumangaliswa, uloyiko, isimanga, uvuyo, njl.
Isinyathelo se6: Isiphelo. Yinxalenye yokugqibela yesicatshulwa sethu. Apha, siza kushwankathela imiba eyahlukeneyo esiye sajongana nayo kwinkcazo, ukunika uluvo olufutshane noludibeneyo loko sikuvezileyo. Ukutolikwa esikwenzayo kwesi sigqibo kuya kuba semthethweni ukuba kuvumelana nawo onke amanqaku abekhe abhengezwa ngaphambili kwingcaciso ebhaliweyo. Kwesi sigqibo, sinokubandakanya umbono wethu, ukoneliseka kwethu kukufunda, iimvakalelo esizidlulisileyo kuthi, ukuvavanywa kokusebenza kwayo, njl.
Ukwenza amagqabantshintshi ngesicatshulwa, nokuba sinamanyathelo ngamanyathelo aneenkcukacha, kuxhomekeke ekuziqhelaniseni, kumkhwa wokufunda esinawo (okukhona sifunda ngakumbi ngasemva kwethu, kokukhona siya kukwazi ukuhlalutya kunye nokunxibelelana koncwadi have), kubunzima bokubhaliweyo okusibeka phambili (akufani ukuhlalutya ezinye "Iileta zaseMorocco" Cadalso kunombongo waseGóngora), njl.
Ke ngoko, siyakukhuthaza Uncwadi lwangoku, ungazibhloki phambi kolu hlobo lokuzilolonga, kuba kwixesha elizayo uya kuba ngumhleli okanye umpapashi wenkampani ebalulekileyo yokupapasha okanye uthanda ukufunda kunye neencwadi kangangokuba uthathe isigqibo sokwenza ibhlog yoncwadi apho beka amakhulukhulu ophononongo. Inkqubo ye- uphononongo loncwadi Amagqabantshintshi ngemisebenzi epheleleyo. Kodwa oku siza kuthetha ngako kwelinye inqaku.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Ngaba unokwenza ingxelo ebhaliweyo?
UJuan pennnnnnnnnnnniz sitsho
Ndifunda iikhomenti zesicatshulwa!
Phendula kuJuan pennnnnnnnnnniz
Ewe, ndamkelekile kakhulu ukuba andilunqumamisa ulwimi lwam ekugqibeleni ngale nto
Kucace gca !!!!
Eli nqaku lalinomdla kwaye lalifundisa thina bafundi, kwaye ndiqinisekile ukuba liyakundinceda ukwenza amagqabaza ngendlela engcono ukusukela ngoku.
Inqaku elilunge kakhulu elisebenza njengesikhokelo xa unika ingxelo ngombhalo, kuba icacisa ngokweenkcukacha inyathelo ngalinye ekufuneka lilandelwe kwinkqubo.
APRILI MARIE MARTE BAEZ sitsho
Inika umdla kakhulu!!
Kuya kufuneka ujonge kwizimvo ezichazwe kwisicatshulwa hayi kwii-anecdotes okanye kwingxoxo. Ungabandakanya ukuvavanywa kweminye imiba yesicatshulwa, njengesimo sombhali malunga nesicatshulwa: umzekelo, ukuba unenjongo okanye ugxeka iinyani okanye abalinganiswa okanye uhlobo lolwimi alusebenzisayo.
Phendula uABRIL MARIE MARTE BAEZ
APRILI MART sitsho
Ndiyifumene inomdla kakhulu !!
Phendula APRILI MARTE
Ababhali abaninzi abaphumeleleyo beBhaso likaNobel basiwa kwiFilimu
Ikhosi kwi "Copyright" enokuthi ikunike umdla njengombhali